Angovo any an-dranomasina na angovo any an-dranomasina sy ireo zavamaniry ao aminy | Fanavaozana maintso
Angovo tondra-drano na angovo avy any an-dranomasina
Daniel Palomino | | Angovo avy amin'ny ranomasina, Angovo azo havaozina, General, Tontolo_iainana
Ny angovo entin'ny onja na ny siantifika fantatra amin'ny anarana hoe tondra-dranomasina dia iray avy amin'ny fampiasana ny onjan-dranomasina, izany hoe ny fahasamihafana eo amin'ny haavon'ny ranomasina, arakaraka ny toerana misy ny Tany sy ny Volana ary izany dia vokatry ny fisarihana gravitiement an'ny farany sy ny Masoandro eo ambonin'ny rano amoron-dranomasina.
Amin'ity fe-potoana ity dia afaka milaza isika fa ny fivezivezin'ny rano, novokarin'ny fisarihana ny Moon indroa isan'andro, azo atao ny mampiasa azy io ho toy ny angovo.
Ity hetsika ity misy fiakaran'ny haavon'ny ranomasina, izay amin'ny faritra sasany dia mety ho lehibe.
Ny Volana dia very hery, miadana tokoa, ary miteraka hery an-dranomasina, izay mahatonga azy io hipetraka amin'ny fahasamihafana lehibe kokoa sy lehibe kokoa amin'ny tany.
Ny eo ho eo ny fanaparitahana ny angovo amin'ny endrika tondra-dranomasina dia eo amin'ny 3,1012 watts, na 100.000 XNUMX eo ho eo latsaka kely noho ny tara-pahazavana azo eto an-tany.
Ny herin'ny tondra-drano dia tsy mitaona ny ranomasina fotsiny, mamorona ny onjan-dranomasina, fa izy ireo ihany koa misy fiantraikany amin'ny zavamananaina velona, mamorona trangan-javatra biolojika saro-bahana izay anisan'ny bioritme voajanahary.
Ny onja vokarin'ny Volana any amin'ny ranomasina dia ambany iray metatra ny haavony, fa any amin'ireo toerana izay manamafy ny vokatry ny onjan-dranomasina ny fanamboarana ny tany dia mety hisy fiovana amin'ny ambaratonga lehibe kokoa.
Izany dia miseho amin'ny faritra marivo vitsivitsy, miorina amin'ny talantalana kaontinantaly ary ireo faritra ireo no azon'ny olombelona ampiasana angovo amin'ny alàlan'ny angovo avy amin'ny rano.
1 Fampiasana herinaratra
2 Fampiasana herinaratra
3 Fitsinjarana ny onja eto amin'izao tontolo izao
4 Angovo mahery vaika any Espana
5 Tombony sy fatiantoka ny angovo avy any an-dranomasina
Mifanohitra amin'izay mety eritreretin'ny olona momba ny angovo any an-dranomasina, efa hatramin'ny ela izy io no nampiasaina, tany Ejipta fahiny no nampiasaina ary tany Eropa dia nanomboka nampiasaina tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Tamin'ny 1580, kodiarana hydraulic 4 azo atsimbina no napetraka ao ambanin'ny tohanan'ny London Bridge hantsaka rano., izay nitohy niasa hatramin'ny 1824, ary mandra-pahatongan'ny Ady Lehibe Faharoa, dia maro ny fikosoham-bary niasa tany Eropa, izay nampiasa ny herin'ny onja.
Ny iray tamin'ireo farany dia nijanona tsy niasa tao Devon, UK, tamin'ny 1956.
Na izany aza, nanomboka ny taona 1945 dia tsy dia liana firy amin'ny herin'ny rano an-dranomasina kely.
Ny fampiasana angovo avy any an-dranomasina amin'ny ankapobeny dia tsotra ary tena mitovy amin'ny herin'ny herinaratra.
Na dia misy fomba samihafa aza, ny tsotra indrindra dia misy tohodrano, misy vavahady sy turbinina mihodina, izay manidy vavahady (vava, any an-dranomasina, misy ony midadasika sy lalina, ary mifanakalo amin'ity rano masira ity sy rano madio, noho ny fisondrotry ny onja. Ny vavan'ny vavahady dia namboarina tamin'ny sandry iray lehibe mivelatra amin'ny fantsom-pivoarana mihitatra), izay misy ny lanjan'ny onja manana lanjany lehibe.
Ny famakafakana ny asan'ny rafitra dia azo jerena amin'ireto sary roa manaraka ireto.
Ny fandidiana dia tena tsotra ary misy:
Rehefa miakatra ny rano dia voalaza fa ny fisondrotana ambony (ny fanjakana avo indrindra na ny haavon'ny halavan'ny onja), amin'izao fotoana izao nosokafana ny vavahady ary manomboka turbine ny rano izay miditra amin'ny estatera.
Rehefa mandalo ny onja ary efa nisy saram-bidy ampy natsangana, mihidy ny vavahady hisorohana ny rano tsy hiverina any an-dranomasina.
Farany, rehefa ny ambany ny onja (fanjakana ambany indrindra na haavo farany ambany azon'ny onja), aondraka amin'ny alàlan'ny turbine ny rano.
Ny fizotry ny fidirana ao anaty rano ao amin'ny vavahady ary koa ny fivoahana, ny turbinina dia mitondra mpamokatra herinaratra mamokatra angovo elektrika.
Ireo turbinina ampiasaina dia tsy maintsy miverina mba hiasa tsara izy ireo na miditra amin'ny vavahady na hiditra ary koa rehefa mivoaka.
Fitsinjarana ny onja eto amin'izao tontolo izao
Araka ny efa nanamarihako teo aloha ny fisondrotan'ny ranomasina dia ampitomboina amin'ny alàlan'ny fanamboarana ny ranomasina amin'ny faritra manokana sasany, izay ahafahana mampiasa ny onja ho loharanon'ny angovo, izay no mahaliana antsika amin'ny farany.
Ny toerana malaza indrindra hanaovana izany dia:
Any Eropa, ao amin'ny helodranon'i La Ranee any Frantsa, ao Kislaya Guba any Russia, ao amin'ny vavahady Severn ao amin'ny Fanjakana Mitambatra. Ireo tranokala rehetra ireo dia misy fisondrotany ambony, miaraka amin'ny fiakarana sy fidinana 11 ka hatramin'ny 16 metatra isan'andro.
Raha mankany Amerika atsimo isika dia mahita fa misy onja mihoatra ny 4 metatra manaraka ny morontsirak'i Silia sy ny faritra atsimon'i Arzantina. Mahatratra 14 metatra ny onja any Puerto Gallegos (Arzantina). Misy tranokala mety ihany koa any akaikin'i Belern sy Sao Luiz, Brezila.
Any Amerika Avaratra, any Baja California, any Mexico, miaraka amin'ny onja hatramin'ny 10 metatra, dia voalaza fa faritra mety hampiasaina ny angovo avy any an-dranomasina. Ankoatr'izay, any Canada, ao amin'ny Bay of Fundy, misy onja mihoatra ny 11 metatra ihany koa.
Any Azia, ny fiakaran'ny rano dia voarakitra ao amin'ny Ranomasina Arabo, ny Helodrano Bengal, ny Ranomasina Chine atsimo, manamorona ny morontsirak'i Korea sy ny Ranomasin'i Okhotsk.
Na izany aza, any Rangoon, Birmania, mahatratra 5,8 metatra ny haavon'ny onja. Ao Amoy (Szeming, Sina), tondra-drano 4,72 metatra no niseho. Ny haavon'ny onja any Jinsen, Korea, dia mihoatra ny 8,77 metatra ary any Bombay, India, ny onja dia mahatratra 3,65 metatra.
Any Aostralia, 5,18 metatra any Port Hedland ary 5,12 metatra any Port Darwin.
Ary farany, any Afrika dia tsy misy toerana tsara toerana, angamba ny orinasa mpamokatra herinaratra kely no atsangana atsimon'ny Dakar, any Madagascar ary any amin'ny Nosy Comoro.
Maneran-tany, manodidina ny 100 ny toerana mety amin'ny fananganana tetikasa lehibe, na dia misy maro hafa aza mety hananganana tetikasa kely kokoa.
Azo ampiasaina mihitsy aza, ho an'ny famokarana herinaratra, tide ambanin'ny 3 metatra, na dia ambany kokoa aza ny tombony azo.
Na izany aza, ny fametrahana tobim-pamokarana herinaratra (mba hahomby) dia tsy misy afa-tsy amin'ny toerana misy fahasamihafana farafahakeliny 5 metatra eo anelanelan'ny sandriny avo sy ambany.
Misy teboka vitsivitsy eto an-tany nitrangan'io fisehoan-javatra io. Ireto no tena lehibe:
Raha fintinina dia azo apetraka amin'ny famokarana herinaratra, amin'ireo toerana lehibe manerantany 13.000 MW, tarehimarika mitovy amin'ny 1% amin'ny tanjaky ny herinaratra azo avy amin'ny tany.
Angovo mahery vaika any Espana
Any Espana ny fandinihana an'io angovo io dia tanterahan'ny Institute of Hydraulics ao amin'ny Oniversiten'i Cantabria, izay manana tobim-panadinana somary lehibe ho an'ny fikarohana sy fanandramana ny atao hoe Cantabrian Coastal and Ocean Basin (injeniera an-dranomasina).
Ny tanky voalaza etsy ambony dia manodidina ny 44 metatra ny sakany ary 30 metatra ny halavany, ka afaka maka tahaka ny onja hatramin'ny 20 metatra sy ny rivotra 150 km / ora.
Etsy ankilany, tsy tavela isika, satria tamin'ny 2011 ny zava-maniry voalohany izay any Motrico (Guipúzcoa).
Ny singa fanaraha-maso dia manana Turbinina 16 afaka mamokatra 600.000 kWh isan-taona, izany hoe olona 600 no lanin'ny salanisa.
Ho fanampin'izay, misaotra an'ity afovoany ity CO2 an-jatony taonina no tsy hidina amin'ny habakabaka isan-taona, tombanana fa manana ny vokatra manadio izay mety miteraka a ala sahabo ho 80 hektara.
Ity tetik'asa ity dia nisy famatsiam-bola manodidina ny 6,7 tapitrisa euro, ka ny 2,3 dia ho an'ny orinasa ary ny ambiny amin'ny asa eo amin'ny seranana.
Ny turbine, izay samy mamokatra 18,5 KWh eo ho eo, dia mizara ho vondrona misy 4 ary miorina ao amin'ny efi-masinina, eo an-tampon'ny jetty.
Ho fanampin'izany, ny faritra izay manaloka azy ireo dia miorina amin'ny iray amin'ireo faritra miolikolika afovoan'ny dike miaraka amin'ny haavon'ny rano 7 metatra sy 100 metatra ny halavany.
Tombony sy fatiantoka ny angovo avy any an-dranomasina
Manana angovo betsaka ny angovo tombony ary ny sasany amin'izy ireo dia:
Izy io dia loharanon-kery tsy mety ritra ary azo havaozina.
Ity iray ity nozaraina tamin'ny faritra midadasika an'ny planeta.
Ara-dalàna tanteraka izanyna inona na inona ora amin'ny taona.
Na izany aza, ity karazana angovo ity dia manolotra andian- drawbacks matotra:
Ny be habe sy vidiny vokatr'izany amin'ny toerany.
Ny filàna manana topografia ny tranonkala izay mamela ny fananganana tohodrano ho mora sy mora vidy ihany.
La famokarana miserana, na dia azo vinavinaina aza ny angovo.
Ny azo atao vokatra manimba amin'ny tontolo iainana toy ny fipetrahana, fampihenana ny morontsiraka estuarine, izay iankinan'ny vorona sy ny zavamananaina an-dranomasina maro, ny fihenan'ny faritra fiompiana ho an'ny karazan-dranomasina sy ny fanangonana ireo reside mandoto ao amin'ny estuaries anjaran'ny ony.
Fepetran'ny fidirana amin'ny seranana miakatra ambony.
Ny lesoka an'ity karazana angovo ity dia mahatonga ny fampiasana azy hampiady hevitra be, noho izany ny fampiharana azy dia mety tsy dia mety raha tsy amin'ny tranga tena manokana, izay ahitana fa kely dia kely ny fiantraikany raha oharina amin'ny tombony azo avy aminy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo avy amin'ny ranomasina » Angovo tondra-drano na angovo avy any an-dranomasina
clemente rebich dia hoy izy:
Taona maro lasa izay dia nahavita niantsoantso hoe "Eureka!" (Archimedes) rehefa misy ny andrana ataoko any an-tranoko dia mahatratra ny rafitra EOTRAC tena tsotra aho, izay manararaotra ny herin'ny rivotra mahery, ny habetsaky ny hery tsy manam-petra, izay voafetra ihany amin'ny fanoherana ireo fitaovana. Avy eo dia nahatratra ny mekanisma tena tsotra an'ny GEM aho izay mamela ny fampiasana misaraka ny hery tsy manam-petra amin'ny onja izay miasa amin'ny lelany ambony (antsy) an-jatony na an'arivony metatra toradroa ary ny fiasa mitovy amin'izany dia manatanteraka ny fidinan'ny onja, sns. - ary maro hafa. mafy - Nikiakiaka aho hoe "Eureka! Eureka!" ho an'ity voam-pasika kely ity mba hamokarana angovo madio, indrisy fa mahery ny fiakaran'ny hafanana manerantany na mihevitra ahy ho "nut". JEREO ny famoronana vaovao amin'ny finday
Izaho dia mpisotro ronono tsotra teraka tamin'ny 1938, TSY MISY manome BOLA ahy, tsy maintsy miaraka aho mahita, mahatakatra ary miady hevitra momba ny herin'ny natiora mihitsy afaka mamokatra angovo madio hampihenana ny GHG ary hisorohana ny fiakaran'ny maripana (afo manerantany) handrava bebe kokoa ny mety hisian'ny fiainan'olombelona eto an-tany.
Mamaly an'i clemente rebich
Ny androngo goavambe dia manjavona any amin'ny Nosy Canary
Ny fivoaran'ny biomassa any Espana